Sirni Cidha Goobsuu Abbootii Gadaa Karrayyuu Gaggeeffamaa Jira – Oromedia
Home » Oduu » Sirni Cidha Goobsuu Abbootii Gadaa Karrayyuu Gaggeeffamaa Jira
(Oromedia, Mata-Haaraa, 1Bitootessa, 2017)– Sirni Cidha Goobsuu Abbootii Gadaa Oromoo Karrayyuu baatii lamaan darban keessaa bifa garaagaraatiin gaggeeffamaa jira.
Sirni kun waggoota lamaan booda sirna walharkaa fuudhinsa baallii Gadaa fi abbootii Gadaa gaggeessamuuf, Sirna Cidha Goobsuu raawwatamaa jiru.
Sirni Cidha Goobsuu kun akkaa aadaa sirna Gadaa Oromoo Karrayyuutti dandeettii Abbootii Gadaa kan gabbisuu dha.
Hayyuun Gadaa Oromoo akka nuuf himanitti, sirni cidha Goobduu kun waggaa lamaan booda abbaa Gadaa aangoo fudhatuuf bulchiinsa sirna Gadaa irratti dandeettii fi muuxannoo bal’aa akka aragtuuf qophaa’a. Abbaan Gadaa kunis sirna kana keessa darbuu qaba.
Sirna Cidha Goobsuu kanaan, abbaan Gadaa waggoota lama booda abba Gadaa Karrayyuu ta’ee baallii fudhatu muuxannoowwan abboota Gadaa amma bulchaa jiranii fi kanneen kana duraarraa sirna dandeettiisaa ittiin gabbifatuu dha.
Bu’uuruma kanaan abbaa Gadaa miseensa Malbaa, Hawaash Roobaa irraa aangoo kan fudhatuuf tahuu miseensa Michillee irraa Abba Gadaa Mi’eessoo Boruu, sirna Cidha Goobsuu kanaan muuxannoo fudhataa jira.
Sirnichaaf baatii lama dura godaansi bakkee Tarree Loogoo jedhamuurraa gara bakka Abaakulaa jedhamutti taasifameera. Yeroo sana irraa eegalee sadarkaa adda addaatti sirni Cidha Goobsuu kun gaggeeffamaa jira.
Sirnicharratti Dabballootni Karrayyuu uffata aadaan miidhaganii, sirboota aadaa sirnichaaf ta’u weeddisaa miidhagina addaa itti tolchanii gaggeessaa jiru.
Previous: Sirni Baallii Walharkaa Fuudhuu Eegale
Next: Yaadannoon Jaarraa Abbaa Gadaa Sambata Kana Kabajama.